Ilaalista xuduudaha oo ganacsiga saameeyn karta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Inrikesminister Anders Ygeman (s) säger till P4 Skaraborg att förlaget från EU om ett nytt vapendirektiv är otydligt. foto: tt
Ilaalista xuduudaha oo ganacsiga saameeyn karta
"Ilaalista xuduudaha ganacsiga uma fiicna"
La daabacay onsdag 20 januari 2016 kl 14.26
Ilaalista xuduudaha waddamada Yurub, tusaalahan ka u dhaxeeya Denmark iyo Iswiidhan, ayaa sameeyn xun ku yeelan kara ganacsiga iyo dhaqaalaha Iswiidhan. Taas waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Anders Ygeman.
Todobaadki hore ayuu madaxa komissionka midowga Yurub, Jean Claude Juncker ka digay in ilaalista xuduudaha mustaqbalka sameeyn ku yeelan karto dhaqaalaha. Dhowr billion oo koroon ayaa halkaas lugu khasaari kara, ayuu jidhi.
Sida ay xaaladu maanta tahay toddoba waddan ayaa bilaabay in ay xuduudahooda ilaaliyaan. Kuwan oo ay Denmark, Iswiidhan iyo Jarmalku ka mid yihiin.
Ygeman ayaa madaxa commissionka midawga yurub kula raacsan fikrika in ilaalista xuduudaha ganacsiga saameyn karto.
-Hadii u arrinkani sii socdo, waxaa laga yaaba in ay dadka dibadaha ka shaqeeya, guryahoodu na waddan kale ku yaalo, ku fikireen in ay sii wadi karaan safarka ay maalin walba galaan. Tusaalhan waxaa jira dad badan oo ku nool magaalada malmö oo ka shaqeeya koobenheegan. Waxaan dhowaan u dhoofaya Denmark si aan dawladda halkaas arrinkan ugala hadlo, ayuu sheegay Anders Ygeman wasiirka arrimaha gudaha ee Iswiidhan.